Manana an'i Shimano ve ny pro? - Bisikileta
Tena > Bisikileta > Fitaovana bisikileta Pro - mitady vahaolana
Fitaovana bisikileta Pro - mitady vahaolana
Manana an'i Shimano ve ny pro?
Ireo singa sy kojakoja behemothShimanodia tsy mahagaga raha mamoaka bevy vokatra vaovao amin'ny seho ara-barotra Eurobike 2016, samy eo ambaninynyanarana sy nyHO AN'NYmarika kely Manomboka amin'ny kiraro ka hatrany amin'ny kitapom-baravarana fampisehoana, be dia be ny manafintohina ny fitiavan'ny bisikileta an-dalambe sy ny mpitaingina bisikileta an-tendrombohitra.
Mpitaingina bisikileta matihanina mandeha an'arivony kilometatra isan-taona. Noho izany, zava-dehibe ny fanitsiana tsara ny vavony mba hisorohana ny ratra na ny lohalika. Fa ny tena tsy dia miresaka firy dia ny safidin'ny mpitaingina kodiarana sy ny hamafin'ny feon-tongotr'akanjonao rehefa miala.
Ka andao hanontany ny sasany amin'ireo mpitaingina ny zavatra ampiasainy ary ny henjana ny pedal-ny. Eo moa. (mozika falifaly) - Mampiasa kofehy mena miraikitra aho ka voatazona ny asako manontolo.
Ho an'ny sprint io dia miharihary kokoa amin'ny olon-tsy fantatra fa tsy hanome fahazoan-dàlana hiakanjo mafy aho. Fantatrao fa mety hampidi-doza kokoa izany, saingy amin'ny haingam-pandeha haingana dia fantatrao fa te-ho voavaha ianao. Te-hahatsapa foana aho fa tsy teo amin'ny làlam-pifaninanana, rehefa teo amin'ny làlam-pifaninanana ianao dia te ho anisan'ny bisikileta ary ny hantsana mafy no fomba tsara indrindra hanaovana izany - koa ho an'ny mekanikanao, Kenny, manana ianao iray amin'ireo orinasa tsara indrindra eran'izao tontolo izao, rehefa tsy maintsy manova ny vatofasinao izy, asa lehibe lehibe izany.- Ny tenako no manao izany Raha, nataoko foana ny vatako, izany no zavatra nokasihinao.
Azonao atao ny refesina arakaraka ny itiavanao azy, fa na ny kiraro aza tsy miovaova rehefa mandeha ny fotoana. Manintona azy ireo foana aho ary malahelo azy ireo ary mametraka azy ireo ary avy eo mbola mila manamboatra micro ianao ka amin'ny diako voalohany dia mitondra lakilen'i Allen 4mm foana aho ary apetrako eo toy izany - Ankehitriny Bram, tsikaritro fotsiny fa mampiasa baoty mavo ianao. Amin'ny mainty kely, mety amin'ny kitorita ihany ve izany satria mety aminao? - (mimonomonona), eny, hitanao izany? - Afaka mihinjitra ity lehilahy ity? Tsy io? (Hehy) - Ie, fa io lafiny io ihany, vita ity lafiny ity, fantatrao - Ka maninona ianao no nisafidy studs mavo? - Betsaka kokoa izy ireo, toa somary mitovy kely amin'ny fihetsika kely fotsiny ianao.
Ka, mieritreritra aho ho an'ny ankamaroantsika, fantatrao ve rehefa milatsaka kely amin'ny ilany ankavia amin'ny bisikileta ianao na amin'ny lafiny ankavanana? afaka mampihetsika ny tongotrao ka tsara kokoa raha misy ratra.- Eny- Ary te hanana fampiononana aho.- Eny- Efa nanandrana ireo loko hafa ve ianao? - Tena efa ela be izay, heveriko fa nanandrana azy ireo indray mandeha ary avy eo manana olana amin'ny lohalika aho - Ah Yeah - Saingy telopolo taona lasa izay - Telopolo taona lasa izay dia tsy toa 30 izy, sa tsy izany? (Hehy) - Ary 32 taona aho izao. (Hehy) - Nanomboka tanora izy, inona no tokony holazaintsika? (Hehy) - Ka Toms, dia nanamarina fotsiny aho fa mampiasa cleat mavo amin'ny pedal Shimanoo ianao.
Fa maninona ianao no nifidy mavo? - Tiako ilay mpilomano eny amoron-dranomasina indraindray, indrindra fa somary misy lokony ny mahazo azy ireo tsara. Ka rehefa manana ny mena ianao dia tsy manana buoyancy ary mety ahiana handratra lohalika na zavatra hafa. Rehefa manana ny mavo ianao dia milomano ary mahatsapa ho tsara kokoa ny lohalika, farafaharatsiny amiko.- Mahafinaritra, ary mbola tsy nanandrana ny hafa ianao hahita ny toerana tena raikitra? - Manana aho, eny, nanandrana ny mena aho ary tsy nieritreritra hoe tsara. (mozika upbeat) - Ho ahy ny manga no tsara indrindra, satria ho ahy ny mavo mihetsika be loatra ary ny mena dia tsy dia tsara, satria tena tsy maintsy apetrakao tsara izany.
Ho ahy, ny safidy tsara indrindra dia ny manga - Eny, efa ela ve ianao no nampiasa manga, sa efa nampiasa mavo na mena ianao? Efa nanandrana izany ve ianao? - Manandrana aho, manandrana ny mena amin'ny voalohany aho, fa ny mena kosa tsy ho vitako ary avy eo ny mavo mahatsapa ny heriko amin'ny pedal dia tsy dia tsara loatra ka aleoko tokoa, aleoko ilay manga - Eny, ahoana ny fihenjanana amin'ny pedal? Somary tery ve izy ireo sa malalaka sa eo afovoany? - Araka izay azo atao, tsy amin'ny tendrony, fa betsaka ny azo atao, mahatsapa ho tsara kokoa aho izao, tsy matahotra ny hamiravira tena aho rehefa manao ireo miolakolaka - Fa maninona ianao no nisafidy manga fa tsy mavo na izany ny loko tianao indrindra sa misy? Siansa? - Loko ankafizin'ny zanako lahy io. (Hehy) - Tsia. - Nandinika fotsiny an'ireo tovolahy momba ny fametrahana bisikileta izahay ary nanolo-kevitra izy ireo fa hanova ahy aho ary miaraka amin'ny mena foana aho ary ilay matanjaka ary ankehitriny dia manana kilalao aho, tsy dia be loatra, fa fomba iray hisafidianana ilay toerana.
Afaka misafidy ny toerana tadiaviny ny vatana - ary ahoana ny amin'ny fihenjanana amin'ny pedal anao? avo dia avo ho an'ny sprint sa ianao mitazona azy eo afovoany? - Nahazo avo dia avo aho, saika avo araka izay tratranao. (Hira fifaliana) - Nathan, nandinika azy fotsiny aho. Mampiasa kofehy manga ianao, nahoana no nisafidy manga ianao? - Satria malefaka loatra ny mavo ary efa nanandrana ilay mena aho taloha ary namela hozatra maratra hatraiza hatraiza aho.
Tsy dia nifanaraka tsara tamiko izy ireo ka heveriko fa miankina amin'ny mpitaingina ny mpitaingina studs ampiasainao - ny mainty no ampiasaiko avy amin'ny Look - Manome ahy ny fihazonana tsara indrindra sy sprinter tena zava-dehibe izy ireo. - Efa nampiasa volondavenona na mena ve ianao na nampiasa ny mainty hatrizay? - Volondavenona no nampiasako, fa noho ny fahatsapako fa tsy tena izy, fantatrao, aleoko tsy dia mahazo fiononana sy mifikitra bebe kokoa noho ny mifanohitra amin'izay. Izao no hany ananako dia ny klo ked amin'ny pedal, tsy hitako hoe firy metatra Newton izy ireo, fantatrao hoe inona izany, toerana mitazona mafy ve io? - tokony ho 22 na 25 ireo, tsy azoko antoka intsony fa eny.- Zava-dehibe izany ho an'ny lehilahy toa anao izay manary watts be. - Marina (mozika mientanentana) - Ka noho izany Elia, tsingerintaona nahaterahana voalohany ary tsikaritro fa mampiasa vatosoa mavo ianao.
Fa maninona no mavo no ampiasainao fa tsy manga na mena? - Hivadika pro aho amin'ny 2010 ary tamin'ity taona ity dia 8 taona no nampiasa Speedplay. Lalao hafainganam-pandeha raha fantatrao, na dia manandrana manidy araka izay tratranao aza ianao dia manana fanatanjahan-tena kely 8 taona, nanandrana nanao fanatanjahan-tena kely foana aho. Ny fomba tokana miverina amin'ny pedal Speedplay mahazatra dia ny fampiasana ny cleat mavo.
sakafo ara-ovy fotsy
Angamba afaka mandeha amin'ny manga amin'ny taona ho avy aho izao, fa ny dingana voalohany manomboka amin'ny Speedplay mankany Shimano no hany fomba ahafahako mampiasa ny studs mavo miaraka amina hetsika kely ka tsy tsapako izany hetsika izany mandritra ny haingam-pandeha - ary raha mandray ianao ny tongotrao dia mila ny pedal, somary tery ve sa manana mpanelanelana na malalaka ianao? - Manana mpanelanelana aho, ka nasiako mpanelanelana amin'ny tsipika malalaka amin'ny pedal, ohatra, tsy mivoaka miaraka amin'ny pedal ianao mandritra ny sprint, fa tsara foana raha mila manala haingana ny kiraronao ianao, afaka manao izany ianao izany. Ie (mimonomonona) no safidiko - Noho izany, Bert andao hijery ny kiraronao. Mampiasa «studs» mainty ianao, nahoana no nisafidy an'ity ianao? - Mafy dia mafy izany ary tsy mihetsika ianao rehefa mikasika ny pedal ka tsara ho ahy izany - Efa nampiasa loko hafa ve ianao mba hanandramana azy ireo? - Eny, 4 taona lasa izay no nampiasako ny volondavenona, fa aleoko ny mainty - Ary ianao koa manana fihenjanana be amin'ny pedal hihazonana anao? - Eny, mieritreritra aho fa ara-dalàna, saingy tsara izany, satria raha sendra tratran'ny lozam-pifamoivoizana ianao dia tsy manana fihenjanana be loatra satria raha tsy izany dia mijanona eo amin'ny bisikileta ianao ary tsy tsara- Tsy tsara.- Tsia (mozika faly) - Ka Alex, studs inona no ampiasainao, vady? - Ny fijery fotsy - Fa maninona ianao no misafidy volondavenona fa tsy mainty na mena? eo anelanelan'ny mainty sy fotsy.
Tsy tena mpanao lomano io, tena tsy mampiasa mpilomano mihitsy aho satria mitaingina ny ombelahin-tongotro tokoa aho ka mandaka toy ny gana ary ho ahy dia ny fampidirana ny voditongotra ho akaiky kokoa ny crank raha tsy mikasika ny crank izy.- Cool , ary mety halaim-panahy hankany amin'ny Blackones ve ianao satria tsy mampiasa float ka mahaliana fa tsy ianao.- Nampiasa ny mainty aho fa izay nody tany an-tranoko mba ho marin-toetra.
Toa tsy dia matihanina loatra izany, saingy tsy mampisy fahasamihafana jamba na volondavenona na mainty izy ireo. Tena tiako izany, azoko atao ny mampiasa ny mena ary tsy hitondra fahasamihafana izany. Ka raikitra fotsiny amin'io toerana io ianao, sa tsy izany? Ka Julien, hitako teo an-dohan'ny peloton ianao, tsy fantatro hoe adiny firy aho no matahotra ny hieritreritra.
Tsy haiko ny momba anao izay studs ampiasainao. Iza no ampiasainao? - Mampiasa ny manga, ny Shimanos manga aho. Azonao ahodina kely izy ireo mba hahafahako mahazo aina kely kokoa amin'izy ireo, satria raha tsy izany dia manana ireo hafa tena tery ihany koa aho.
Fa avy eo dia tsy maintsy zatra ny lohalika sy ny sisa, satria avy eo tsy maintsy lavorary ary aleoko manana fihenjanana kely ho an'ny tonon-taolana sy ny sisa dia somary mihatsara kely fotsiny aho - Efa nampiasa ny raikitra tanteraka ve ianao iray sa tsia? - Angamba efa nanao an'izany aho taloha ela be, saingy mbola nitaingina fijery ihany aho ary ankehitriny dia mahazo aina amin'ireo ary fantatro rehefa antitra ianao noho ny korontana sy ny sisa rehetra - Tsy mbola antitra izy - Tsy mbola, fa izaho kosa efa nitaingina kiraro ireto nandritra ny fotoana kelikely. Saingy tsy maninona aho fa omeko ny rahalahiko foana hanamboarany azy. Apetrany ny studs ary afaka aho ary milamina aho - Mahafinaritra, ka ny rahalahinao, izy no lehilahy nanangana azy ireo ho anao, mandany ny refy rehetra izy? - Ie, manao ny bisikileta izy ary ny fandrefesana ny vavahady dia tena ilaina tokoa satria tsy tiako ny miova be, satria milimetatra foana io ary efa zatra ny vatanao, satria ny Ridi anao dia teo amin'ny bisikileta ora sy ora maro ary raha misy fahasamihafana kely dia afaka mahatsapa izany avy hatrany ianao.
Tena zava-dehibe tokoa ny fandehan'ny raharaha ary ny fananako ny rahalahiko izao. (Hehy) Izy izao no manao izany, ka tsy ataoko izany dia mila mandeha lavitra amin'izany aho. Matoky azy 100% aho - Mahafinaritra, eo isika, ny fitiavan-drahalahy.
Tiako izany. (Mozika manandratra) - Inona ny lokon'ny studs ampiasainao? - Mavo amin'ny pedal Shimano - Eny ary ary maninona ianao no nisafidy mavo fa tsy mena na manga, tsy hoe satria tianao ny loko toa azy, sa tsy izany? (Hehy) - Tsia. Satria mbola afaka mihetsika kely ny tongotro mandritra ny fiofanana sy ny fihazakazahana.
Satria raha terena hitazona ny tongotrao amin'ny toerana ratsy mandritra ny 6 ora ianao dia mety tsy ho hitako tsara loatra izany. Ka izao mbola azoko atao ihany ny mamindra azy, fa apetrako amin'ny tongony mafy indrindra ny tadiko ary avy eo tsy dia malalaka loatra izy io, saingy mafy orina ary mbola azoko afindra. - Fa maninona no nofidinao ity iray ity? - Ny mainty no sahaza ahy indrindra oats, sa ny mainty no afa-po fotsiny? - Eny, nampiasain'i Mano ireo degre telo. - Eny- Heveriko ho toy ny dikanteny antonony, fa miaraka amin'ny Look herelike ny safidy antonony dia ny float kokoa ary eto hitako ny mainty tsara kokoa ho ahy inona no hiantsoako azy io diplaoma. - Eny, eto isika, iray diplaoma mitsingevana.- Fa maninona no ampiasainao ireo manga? - Rehefa misy elanelam-potoana kely sy mihetsika kely nefa mbola mikatona ihany ary eny heveriko fa tsy mila miresaka betsaka momba izany isika, io dia karazana pedal tsara indrindra any.
Ary ny rafitra tsara indrindra. Ary aleoko ny manga, raha manana float kely ianao dia mandehana mavo ary avy eo mbola misy mena. Ka mitondra fiara mankany afovoany aho ary mbola tsy nanana olana mihitsy aho - eo afovoan'ny arabe izahay.
Saingy azo antoka fa tsy eo afovoan'ny mpamily lalana izy. Ka eto amin'ny Divide Tour ireo karazana pedal malaza indrindra ananantsika ao amin'ny peloton dia avy amin'i Look sy Shimano. Andao hojerentsika ireo takelaka misy ny pedal ary koa ireo rafitra miady saina.
Eo moa. (mozika miakatra) Ary, ny mpitaingina mampiasa pedal Looks dia mifidy ny maodely Blade na ny Keo classic. Ankehitriny ny lelany dia tsy mampiasa lohataona nentim-paharazana hitazomana ny tsindry amin'ny kitron'ny mpitaingina.
Fa kosa, mampiasa takelaka karbaona. Ahoana ny fampiasana an'ity? Ny elatra dia ampidirina ao ambanin'ny pedal. Ary izany dia mitazona ny tavy hisavorovoroana.
Amin'ny ankapobeny dia misy voltages roa misaraka, na 12 na 16 metatra Newton tonga fenitra, na izany aza misy sombiny 20 Newton metatra fanampiny azonao vidina izay tena mamaritra ny habetsaky ny hery ilaina hidirana sy hivoahana. Na dia mampiasa loharano aza ny pedal Look Keo mba hitazomana ny fihenjanana eo amin'ny lohasaha rehefa miditra sy mivoaka ianao, dia ahitsy amin'ny lakilen'i Allen eto amin'ny backplate. Ankehitriny ianao dia afaka mametraka ny voltages eo anelanelan'ny 8 sy 12 Newton metatra. (mozika upbeat) Ary ny maodely malaza indrindra amin'ny pedika Shimano hitantsika dia ny SPD-Sl ary indrindra ny maodely Dura-Ace 9100.
Ahoana no fiasan'izy ireo? Isika rehetra dia mitovy amin'ny KEO amin'ny fijery mahazatra satria ny fihenjanana dia ahitsy amin'ny alàlan'ny lakilen'ny Allen hampitomboana na hampihenana ny fihenjanana ilaina hidina na hivoahana amin'ny pedal. Saingy ohatrinona ny tadiny ilaina? Tsy fantatro fa tsy tanisain'i Shimano ao amin'ny tranonkalany izany. (mozika upbeat) Ankehitriny mankany amin'ny lohasaha tena izy.
Look dia manolotra karazana studs telo samihafa. Fa inona no tena dikan'izany? Eny, miaraka amin'ny Look dia midika izany fa manana kofehin'ny hetsika ombelahin-tongony ianao, na misondrotra isaky ny kofehy. Io indray dia ahafahanao mihetsika kely ny lohalinao.
Ka andao atomboka amin'ny stud mainty. Raha ny marina dia tsy manana buoyancy izany, noho izany ianao dia mihidy tanteraka ao amin'ny cleat izay antenainao avy amin'ny sprinter, ohatra. Ary avy eo amin'ny volo fotsy dia manome 4 1/2 degre amin'ny voditongotra izy ireo.
Ary farany, ny cleat mena izay manome hetsika 9 degre, izay tena tsara Shimano dia manolotra safidy cleat telo ihany koa. Voalohany, ny vavahady mena Shimano dia mikatona tanteraka amin'ny toerany ary tsy misy hetsika mihodinkodina. Avy eo isika dia manana safidy manga izay manome 2 degre mitsingevana amin'ny voditongotra ary izany dia zavatra iray nangatahan'ny mpitaingina matihanina.
Ka io no fenitra amin'ny pedal R9100 nojerentsika. Lava mavo, avelan'izy ireo mihetsika vitsivitsy ary ny teboka misy an'ireo vatomamy ireo dia eo afovoan'ny hantsana. Izy ireo dia manao izany amin'ny alàlan'ny fananana faritra ety anoloana amin'ny loaka izay ampidiriny ny pedal.
Ny fahazoan-dàlana amin'ireo cleat ireo dia 6 degre, noho izany dia mamela anao hanana fihetsiketsehana na eo aloha na any aoriana. Io izahay. Safidy mahaliana sasany nataon'ny mpamily tao.
Ary tsy fantatro mihitsy hoe Mark Cavendish no nifanaraka sy nanolo ny vatony manokana. Mianara zava-baovao isan'andro. Ampahafantaro fotsiny ahy izay studs ampiasainao sy ny antony amin'ny hevitra etsy ambany.
Ary ankoatr'izay, tiako ho fantatra hoe akaiky ny nametrahanao ny famoahana anao. Ary alao antoka koa fa tianao ity lahatsoratra ity miaraka amin'ny namanao ary raha mila lahatsoratra iray momba ny antony tsy hikorotan'ireo mpomba azy ny fotony, kitiho eto ambany.
Inona ny rojo vy ampiasain'ny pros?
Fa inona fotsiny no mandehaAzanyfampiasana pro? Nandritra ny taona maromatihaninaNifikitra tamina fenitra 53 / 39trojo vy, satria haingam-pandeha haingam-pandeha tokoa izy ireo ary mila fitaovana lehibe.22. 2019.
Ny bisikileta matihanina dia niova tamin'ny fomba maro, tato anatin'ny folo taona lasa. Ary lafiny iray misongadina nefa manan-danja ihany koa ny fampitahana ny fitaovana ampiasain'ny mpamilin'ny kamio Katusha Alpecin. Azonao atao ny milaza amin'ny alàlan'ny zava-misy fa mivangongo eo feno bisikileta ekipa mena tsara tarehy.
Ao anatin'ity boaty kely ity dia manana kasety voafantina isika; Ka ny kodiarana any aoriana izay misy ho an'ny mpamily dia tsy tokony ho ny antsasaky ny safidy. Ny mpamily dia mety nampiasa 11-21 na 11-23. Amin'ny tranga henjana dia mety 11-25.
Ka be dia be ny kitapom-batsy miaraka. Izao anefa, ny kasety kely indrindra eto dia 11-25. Avy eo izy ireo dia manana 11-26, 11-28 izay ampiasain'izy ireo mandritra ny andro, avy eo 11-30 ary na dia cartridges efatra 11-32 eto aza dia natokana ho an'i Tony Martin izay tia mandany azy tontolo andro amin'ny fivezivezena rojom-be.
Toa somary hafahafa ihany izany, sa tsy izany, satria tsy mihalalina ny arabe, nihatsara ny haitao bisikileta, tsy mihisatra firy ny mpitaingina, raha ny tena izy, fa niha mora kokoa ny fitaovany. Heveriko fa mila mametraka fanontaniana vitsivitsy isika. Jason dia mpilalao bisikileta mpomba ny taloha ary ianao.
Izaho dia nifandray tamin'ny SRAM nandritra ny 10 taona? Ka ianao no karazana nampitohy ny elanelana misy eo amin'ny ekipa sy ny fanamboarana. - Marina tokoa, eny - Eny ary, tsara toerana ianao mba haneho hevitra momba ny fiovan'ny fitaovana mifantina, ny fitaovan'ny fitaovam-pifandraisana, tato anatin'ny roa taona lasa - manantena aho fa eny - Eny ary, maninona isika no mahita an'io fiovana io? Raha mamela ny sazy ianao! - Ie, heveriko fa mahita tokoa isika hoe ny 11-25 no kasety mahazatra 10 taona lasa. Nandeha an-tongotra sy dingana an-tendrombohitra daholo izy ireo tamin'ny fizahan-tany, nankany amin'ny 26 izy ireo, raha 26 na 28 kosa ankehitriny no lasa cassette, ary amin'ny dingana an-tendrombohitra dia mandeha 30 na 32 santimetatra izy ireo, fa eo amin'ny amin'izay fotoana izay dia afaka mahita ianao fa mitaingina rojo vy lehibe kokoa hatrany amin'ny sehatra fisaka.
Midika izany fa mihitatra fotsiny ny faritry ny fitaovana - ary noho izany dia manitatra izy io. Moa ve izany ny fangatahana avy amin'ny ekipa izay notanterahinao avy eo, sa tranga iray izay ampiasain'ny mpamily andiana rojom-bolo ary mahazo tombony amin'ireo fampitahana fitaovana lehibe kokoa any an-tendrombohitra ka tsy mihazakazaka izy ireo, ka izany no manosika izay ataon'izy ireo Mampiasà ekipa? - Tsia, ny tiako holazaina dia manome ny ekipa izay tian'izy ireo hampiasaina avy amin'ny faritra misy anay izahay, ary ny derailleur aoriana WiFLi izay mamela azy ireo hiakatra amin'ny fitaovana 32 nify dia manome azy ireo ny fahafaha-mitarika bisikileta amin'ny ankapobeny. fitsangatsanganana ary ny hany mila ataonao dia ny manova cassette. Amin'ny Compact dia tsy mila manao izany ianao ary manatsotra ny fiainanao amin'ny ankapobeny fotsiny.
Fa maninona no ataonao mihintsy? Mihabe ny zava-misy fa mihabe ny cadence, koa manao ahoana ny hafaingan'ny hafaingan'ny bisikileta, sa miadana kely fotsiny izy ireo? Ny tiako holazaina dia tsy mieritreritra aho fa izany no izy - mieritreritra aho fa handeha miadana kokoa ny mpitaingina bisikileta, mieritreritra aho fa mandeha haingana kokoa amin'ny bisety ny bisikileta, na ny tombotsoan'ny fiofanana tsara kokoa sy ny aerodynamika tsara lavitra amin'ny bisikileta 10 taona lasa izay, 20 taona lasa izay, fa raha mijery lahatsoratra tamin'ny taona 70 ianao dia tena afaka mahita fa manao an'io zavatra maro io izy ireo ary ankehitriny fantatrao, tena tsara ny mihazakazaka eny amin'ny havoana. Ka ny fomba bisikileta iray manontolo dia niova hoy aho. Satria
Ankehitriny manana ny fotoana hitondranao ireo fitaovana ireo ianao. Ireo tovolahy tamin'ny taona 70 sy 80 ary na dia teo am-piandohan'ireo taona 90 aza dia tsy nanana vintana velively - Ankehitriny ireo mekanika Katusha dia nilaza tamiko fa ny mpankafy kassette 11-32 lehibe indrindra dia i Tony Martin. Ankehitriny izy dia mety ho iray amin'ireo mpitaingina matanjaka indrindra amin'ny peloton.
Ary maninona ny bandy toa an'i Tony no mitondra 11-32 satria cassette lehibe ny 32, sa tsy izany? - Marina tokoa, saingy manana rojo 58 amin'ny bisikiletany izy, ohatra - okay, ampy tsara - mba hahafahany mitaingina rojo vy lehibe amin'ny kasety 32t saika isaky ny fotoana rehetra ary fantatrao fa izany no tanjony. Rehefa midina haingana izy dia manana fitaovana mety hitifitra 75, 80 Ks isan'ora izy ary mbola mandeha an-tongotra ihany, fa tsy mandeha amin'ny lalana rehetra na mamerina amin'ny laoniny - ka, araka ny filazanao, dia tena tafiditra fotsiny, araka ny filazanao an'i afaka mijanona ela kokoa ao anaty rojo lehibe ary noho izany tsy mila mampiasa ilay peratra kely mihitsy? - Marina tokoa. Ny tiako holazaina, indrindra fa rehefa manana rojo vy ianao amin'ity paozy ity dia manana elanelana be eo anelanelan'ny rojo vy lehibe sy ny rojo vy kely ianao, noho izany dia tena te-hijanona ao anaty rojo vy lava araka izay azo atao izy ireo - noho izany dia miahiahy bebe kokoa ireo mpitaingina azy amin'ny fitsimbinana ny tongony sy ny fanaovana azy ireo fahasimbana kely araka izay tratra mba hahafahan'izy ireo mihatsara kokoa amin'ny faran'ny hazakazaka telo herinandro.
Fa ny teknolojia koa dia nitana andraikitra lehibe, koa andao jerena ny iray amin'ireo vatasarihana Katusha eto. Ity dia SRAM eTap derailleur aoriana ary, araka ny hitanao dia misy derailleur aoriana kely eo ho eo ary io koa ilay antsoin'izy ireo hoe WiFLi, ary ny zavatra ataony dia i. Midika izany fa io derailleur aoriana io dia azo averina. mankany amin'ny bisikileta mandavantaona ary ny mekanika dia afaka mifamadika mora foana eo anelanelan'ny kasety 11-25 sy 11-32. Midika izany fa tsy ilaina ny ezaka fanampiny ary ny 11-28 dia mety nanakivy ny telozoro farany vaovao ary na ny rojo vaovao aza hahalava kokoa azy.
Ka ny fandrosoana ara-teknolojia toa ny WiFL no namela ny mpitaingina haka moramora ny tongotr'izy ireo, hampiasa paosy sahaza kokoa azy, ary avy eo handeha haingana kokoa. Ankehitriny ny ekipa dia mbola mampiasa derailleurs cage fohy, toa an'ity ihany. Hitanao fa kely kokoa noho ny fampitahana izy io.
Saingy mandaitra fotsiny amin'ny bisikileta fitsapana fotoana, izay ahafahanao mahazo antoka fa tsy mila fitaovana mora be ireo mpitaingina azy satria tsy dia miakatra havoana goavambe ianao mandritra ny fotoam-pitsarana. Izany no antony mbola misy an'io. Eny, izany dia antenaina fa hanome hazavana kely momba ny fivoaran'ny boaty eo amin'ny Pro Peloton; fifangaroan'ny safidin'ny mpitaingin-tsoavaly izay mitaky fitaovana ambany kokoa amin'ny tahan'ny fiakarana haingana, ary avy eo ampifanarahana amin'ny fandrosoana ara-teknika amin'ireo singa toy ny SRAM WiFLi.
Mba hanaovana izany, tsindrio fotsiny izao tontolo izao, avy eo, raha mila votoaty bebe kokoa ianao, maninona raha jerena ny bisikileta Tony Martins TT miaraka amin'ity rojo vy mifono vy 58 nify ity. Ary avy eo manana ihany koa ny fitsapana kely momba ny famindrana fiara mifehy sy mifindra ary izany dia tany Mortirolo nampatahotra tany Italia.
Avy any Shina ve i Shimano?
(?????????, Kabushiki-gaishaShimano) dia mpamokatra indostrialy japoney misy singa bisikileta, fitaovana fanjonoana ary fampitaovana lakana.An'i Shimanony orinasa mpamokatra entana voalohany dia ao Kunshan,Shina; Malezia; sy Singapaoro.
Misy faritra Shimano sandoka?
Tandremo azafadysandokavokatra an'nyShimanoCleat Sets. Misaotra anao noho ny fahatokianao sy ny fanohananao ny vokatray. Manenina izahay,sandoka Shimanoamidy tsy ara-dalàna ny vokatra ao amin'ny magazay eo an-toerana, tsena parasy an-tserasera ary toerana hafa an-tseraseraamin'nysy ivelan'i Japon.
Bisikileta an-tendrombohitra ity, ary ny fon'ny bisikileta rehetra no endriny. Andao atomboka amin'ny ampahany amin'ny frame. Ireo no fantsona ambony, fantsom-by, fantson-seza, fijanonan'ny seza ary fijanonana rojo.
Ny faritra etsy ambany dia antsoina hoe akorandriaka ambany. Eo anoloana indrindra amin'ny bisikiletanao no misy ny fantsona lohany, izay misy ilay fantsona mpamily. Mihetsika am-pilaminana ity noho ny andiana bearings sy bearings izay fantatry ny rehetra amin'ny taha hetra.
Etsy ambony dia misy spacer an'ny headset sy ilay fotony. Ilay tsorakazo, izay mifatotra amin'ny kiran-tànana, dia miraikitra amin'ny fantsom-pamonoana misy satrony sy visy fametahana azy. Ao amin'ny kitaponao dia ho hitanao ny levers frein, levers shift, grips ary plug-in farany.
Ireo rehetra voalaza etsy ambony ireo dia antsoina hoe cockpit. Ny mandroso dia ny forkanao, izay amin'ity tranga ity dia forkara fampiatoana. Antsoina hoe satroboninahitra ity ambony ity.
Ny bisikileta sasany dia misy tadiny satro-boninahitra roa ho an'ny fitoniana fanampiny. Ny satro-boninahitra dia mitazona ny stanao anao izay tokony hiezahanao faran'izay tsara tsy azonao atao. Aza manantona ny bisikiletanao amin'ny alàlan'ny kick-chion.
Ireto ambany ireto ny kaliperinao izay mijanona eo amin'ny kapilao rehefa manindry ny levera vakinao ianao. Ny calipers sasany dia mekanika, ny sasany kosa mandeha amin'ny hydraulic. Ny hidin-tsolika dia manosika ny tsiranoka amin'ny alàlan'ny fantsom-pifandraisana, raha ny freins mekanika kosa dia misintona ilay caliper amin'ny tariby.
Raha miara-mividy ny kodiarana aloha sy aoriana ianao, dia antsoina hoe kodiarana izany. Ny faritra rehetra amin'ny kodiaranao dia mihazona miaraka am-baravarana izay mifamatotra amin'ny sisin'ireo tovolahy kely ireo. Nantsoina hoe nipples izy ireo.
Ny sisiny dia vatan-tsolika izay ampiasaina hantsaka rivotra mankany amin'ny kodiaranao. Eo afovoan'ny impeller no misy ny hub ary misy bearings ao amin'ilay hub. Mihodina manodidina ny axis ny foibe.
Amin'ny bisikileta an-tendrombohitra maro, ity dia manana endrika famaky-by izay azo esorina na hapetraka amin'ny tanana. Hub misy kasety amin'ny kodiarana any aoriana. Ny rafitra ratchet dia natsangana tao, izay natao handraisana kasety.
Ny cassette dia andiana forona izay azo ovaina araka ny sitra-pony. Ny haben'ny fitaovam-piadiana tsirairay dia aseho amin'ny t. refesina ny isan'ny nifiny, ary ireo nify ireo dia natao manokana hiasa amina rojo.
Ny rojo misy anao dia misy rohy tsirairay, miaraka amina rohy iray manokana izay mora vahana. Io ilay antsoina hoe rohy mihantona. Ny rojo dia azo ahodina sy midina amin'ny cassette miaraka amina derailleur mifatotra amin'ny bisikileta amin'ny alàlan'ny sombin-javatra marefo antsoina hoe «hangerurur».
Raha mipoaka na miondrika ny hanger derailleur anao dia azonao atao ny mahazo vaovao ho an'ny tranom-borona hitazona ny fihenjanana ao anaty rojo. Ny rojo dia mamakivaky ny pulley ambony sy ny pulley ambany, fantatra koa amin'ny hoe jockey na pulley. Raha mifindra any amin'ny akorany ambany bracket ianao dia ho hitanao ny crankset anao, miaraka amin'ireo faritra hita maso indrindra ny crank.
Ny sandry crank dia miraikitra amin'ny spindle izay mamakivaky andiana bearings izay ao anatin'ny akorandriaka ambany. Ny spindle sy ny bearings dia antsoina miaraka amin'ny bracket ambany. Ny ampahany miaraka amin'ny nify rehetra dia antsoina hoe rojo vy.
Ny bisikileta sasany dia manana hatramin'ny 3 amin'izy ireo. Amin'ny faran'ny vatan-kazo dia misy pedal izay hita amin'ny endrika maro samihafa. Ny crankset, rojo, derailleur, ary cassette dia antsoina hoe drivetrain-nao Amin'ny bisikileta mihantona feno, dia hahita zavatra isan-karazany mampifandray ny kodiarana aloha sy aoriana amin'ny bisikileta, antsoina hoe rohy fampiatoana.
Ny afovoan-tany dia ny volanao. Matetika izy io dia miraikitra amin'ny rohy mifandray sy fantsona ambony amin'ny lafiny iray, na ilay fantsona midina amin'ny ilany. Any ambony no ananantsika ny seza na ny lasely.
Azo ifanakalozana ireo teny roa ireo, saingy mihevitra ny olona sasany ho sahisahy ny miantso azy hoe lasely. Manokana Tsy raharahako izay antsoinao azy raha mbola ataonao izany. t manitsy olon-kafa.
Na izany na tsy izany dia tsy tsatoka seza ity, fa seza iray ihany, ary miraikitra amin'ny bisikiletanao amin'ny fametahana tsatoka na vozon'akanjo. Amin'izao fotoana izao dia maro ny sezan'ny seza azo ovaina amin'ny sidina. Ireo dia antsoina hoe poste dropper.
Ka vao nanonona ampahany 50 mahery tamin'ny bisikileta an-tendrombohitra aho, saingy ireo faritra rehetra ireo dia azo zaraina an-jatony maro. Soraty ao anaty hevitra ireo teny ireo, ary raha tena mankaleo ianao dia jereo raha afaka mahita ny isan'ny voambolana nampiasako tato amin'ity lahatsoratra ity ianao. Lazao ahy ihany koa ny fomba fanonona derailleur.
Iray amin'ireo olona miteny 'derailleur' ve ianao? Na izany na tsy izany, misaotra anao nitondra fiara niaraka tamiko androany, mihaona amin'ny manaraka.
Inona ny tahan'ny fitaovana tsara indrindra ho an'ny bisikileta an-dàlana?
Amin'ny cadence 90 rpm (izay tena ahazoana aina sy ny ankamaroan'ny olona afaka mitantana betsaka kokoa), ny rojo vy 50-nify sy ny zana-borom-borosy 12 dia manome hafainganana 47 km / h. Atahan'ny fitaovanaan'ny 4.17: 1, ka avo indrindratahan'ny fitaovanamanodidina ny 4: 1 dia tokony ho ampy amin'ny halavirana lavitrabisikileta.
Inona avy ireo fitaovana ampiasaina any an-tendrombohitra ny pro?
Amin'ny ankamaroan'ny pro lehibe colsAmpiasaoa 39 X 23 na 21Fitaovana. Ny sasany amin'ireo tovolahy lehibe kokoa dia mety mila cog any aoriana any aoriana. Amin'ny sasany amin'ireo fiakarana mahatsiravina toa an'i Zoncolon tamin'ny 2003's Giro dia nisy pro sasany nisafidy rojo vy telo natsangana.
Misy pedal Shimano sandoka ve?
Tandremo azafadysandokavokatra an'nyShimanoCleat Sets. Manenina izahay,sandoka Shimanoamidy tsy ara-dalàna ny vokatra ao amin'ny magazay eo an-toerana, tsena parasy an-tserasera ary toerana hafa an-tseraseraamin'nysy ivelan'i Japon.
Ahoana no ahafahanao miteny amin'i Shimano sandoka?
Manadio ny sisiny
Miresaka momba ilay rojo ihany. Ny iray tany am-boalohany dia tokony ho tsy namboarina tamin'ny lafiny iray, ary toa izany.SANDOKAireo dia voasokitra amin'nyshimanoary modely rojo ho an'ny roa tonta amin'ny rojo ary nalamina tsy tapaka. Raha hitanao fa vonoina lehibe io.
Shimano amin'ny AliExpress ve sandoka?
Ahoana no ilazanao? Tsy afaka - misysandoka Shimano,SANDOKAKMC, snsAliExpress.
Inona no fitaovana tokony hisy ny bisikiletako rehefa miakatra?
Rehefa mitainginamanatrika ilay havoanana miditranyheadwind, tsara kokoa ny mampiasanyrojo kely na eo afovoany ary rojo aoriana lehibe. Rehefa mitaingina midina dia tsara kokoa ny mampiasanygadra rojo lehibe kokoa arynyisan-karazany nynyzana-kazo kely any aoriana.
Karazana fitaovana mandeha bisikileta inona no atolotry ny môtô?
ProOwnedCycling dia manolotra akanjo mitaingina bisikileta, fitaovana ary bisikileta avy amina mpitaingina bisikileta matihanina sy ekipa mpomba ny bisikileta. Izahay dia manome antoka foana fa hahazo vokatra avo lenta ianao, noho ny zavatra niainantsika nandritra ny taona maro.
Aiza no ahafahako mividy fitaovam-piadiana ekipa matihanina amin'ny bisikileta?
Ankehitriny dia manana fotoana hidirana amin'ny fitaovan'ny ekipa mpomba izay nananan'ny mpitaingina bisikileta tsara indrindra ianao. Ny entanay dia tany am-boalohany sy 'pro-fananana' avy amin'ireo ekipa matihanina, ary ahitana akanjo roa, akanjo mahazatra, kojakoja, fitaovana ary bisikileta. Izahay dia mivarotra fitaovam-bisikileta avy amin'ireo mpanamboatra izay manohana ekipa bisikileta matihanina.
Iza no tranokala tsara indrindra ho an'ny fitaovana bisikileta?
ProOwnedCycling dia manolotra akanjo mitaingina bisikileta, fitaovana ary bisikileta avy amina mpitaingina bisikileta matihanina sy ekipa mpomba ny bisikileta.